Zvapupu zvaJehovha kuNyika dzokuAsia neMiddle East
VANOGARAMO 4 315 759 010
VAPARIDZI 703 271
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 732 106
Akabvunza Kana Vamwe Vaigonawo Kuuya
KuIndonesia, imwe hama yakapa mumwe murume anoona nezvekupaka motokari pepa rekumukoka kuChirangaridzo mazuva maviri chisati chaitwa. Murume wacho uyo aiva muMuslim, akabvunza kana vamwe vaigonawo kuuya sezvo akanga angopiwa pepa rimwe chete. Hama yacho yakati zvinoita. Murume uyu akati ane mhuri yakakura, saka akakumbira mamwe mapepa. Hama yacho yakamupa 20, ikatsanangura kuti chiitiko chacho ndechekuyeuka rufu rwaJesu uye kuti vanhu vese, kusanganisira vaKristu nevaMuslim, vanogona kuuya. Murume wacho akati aizouya nevanhu vanosvika 60 kana 70.
Hurukuro yeChirangaridzo yakatanga paine vanhu 248. Ichangotanga kudaro murume uya akabva asvika aine vanhu vanenge 100, varume, vakadzi, vana kusanganisira vakwegura uye mumwe mukadzi akanga akurirwa nepamuviri. Kuti vauye kuhotera kwaiitirwa Chirangaridzo, vakahaya motokari dzakati kuti. Magadhi epahotera paakaona vanhu vakawanda kudaro vachiuya, akambovarambidza kupinda. Vakashamiswa kuti vaMuslim vakawanda kudaro vaitsvagei pamusangano wevaKristu. Vanhu vacho pavakabudisa mapepa okuti vainge vakokwa, magadhi akabva avaperekedza kwaiitirwa musangano wacho. Vanhu vanenge 60 paboka iri, ndivo vakakwanisa kupinda mawaiitirwa, umo mainge mazarisa.
Pashure pemazuva mashoma, hama iya yakazoshanyira murume uya anoona nezvekupaka motokari, ndokumubvunza kana vaakauya navo vainge vanakidzwa nepurogiramu. Akati pakutanga vose vainyara kuuya. Akabva awedzerawo kuti vakazoshamiswa nokuti vanhu vose vaivapo vairatidza kuvafarira, vachivakwazisa vachivabata chishanu pakapera musangano wacho. Hama iyi yakabva yamukoka kuhurukuro inokosha yaizopiwa musi weSvondo wevhiki raitevera. Akauya nevanhu vanenge 40 vaisanganisira vemumhuri yake nevavakidzani. Sezvo vakasvika hurukuro yacho yava kunopera, vakuru vakaronga kuti idzokororwe. Sachigaro akasumazve hurukuro yacho, ndokutsanangura purogiramu yacho muchidimbu kusanganisira rwiyo nemunyengetero. Kuti abatsire vaMuslim ava, mukurukuri wacho aishandisa mashoko avanoziva; pane kuti ati “Bhaibheri” aiti “Bhuku Dzvene” uye pane kuti “Jesu” aiti “muprofita Isa.”
Mumwe mukuru akazoshanyira murume uya kumba kwake uye akatanga kudzidza naye Bhaibheri achishandisa bhurocha raTeerera Mwari. Vamwe vanhu 12 vakazobatana navo pachidzidzo chacho kusanganisira vamwe vakadzi vechiMuslim nevana vashomanana.
Zvinyorwa Zvokuverenga Mumabhazi
Mongolia: Vaparidzi vakabvumirwa kuti vaise zvinyorwa mubhazi kuti vaizokwira vaverenge
Mabhazi anobva muguta reUlaanbaatar, kuMongolia, anosvika kwose kwose munyika iyi. Mamwe acho anogona kuita maawa 48 ari munzira. Vanenge varimo vanenge vakatarisa havo panze kana kuti vakarara. Kunyange zvazvo vanhu vemuMongolia vachifarira kuverenga, zvekuverenga zvacho munenge musina. Saka dzimwe hama dzeUngano yeSonginokhairkhan dzakaenda kuvatyairi vemabhazi, ndokuvaudza kuti: “Tine chipo chatiri kuda kukupai chebhuku rakanaka. Mundege munowanzoiswa zvokuverenga muhomwe yepaunenge wakagara. Kana muchiona sekuti vanhu vanokwira mabhazi enyu vangazoda mabhuku ekuverenga, tinogona kuvaisira muhomwe dzepavanenge vakagara.” Vatyairi 8 vakabvuma. Saka hama dzakaisa magazini 299 uye mabhurocha 144. Vakarongawo kuti vaizounza magazini matsva anenge achangobuda vachibvisa ekare.
Mune imwe nyika yokuAsia, vamwe vakuru vaviri vakakumbirwa kuenda kunoona imwe hanzvadzi yakanga yava nemakore 8 isingaiti basa. Sezvo vakanga vasingazivi hanzvadzi iyi, vakaifonera ndokuronga kuzoonana nayo kuchitoro chayo chaiva pakati pezvimwe zvitoro zvakawanda. Pashure pekufamba nemutunzira twaivhiringidza, vakazosvika paiva nechitoro chaienderana nekero yavakapiwa nehanzvadzi iya. Vachipinda, vakakwaziswa nemukadzi aiva neBhaibheri duku patafura yake. Paakavaudza zita rake, kumusha kwake, uye zera revana vake vaviri, hama idzi dzakafunga kuti ndiyo hanzvadzi iya yakanga isingachaiti basa. Dzakabva dzati: “Tiri hama dzako, Zvapupu zvaJehovha.”
Achiratidza kuvhiringidzika akapindura kuti, “Ndiri muKristu.” Izvi zvakashamisa hama idzi. Kunyange zvakadaro, vakamupa zvinyorwa zveBhaibheri, akazvifarira chaizvo. Asi hama idzi padzakanga dzava kuenda, dzakaona kuti dzainge dzarasika! Dzaifanira kuenda pachitoro nhamba 2202 asi dzakanga dzaenda pa2200. Mumwe wevakuru ava akati: “Ndakamerera. Zvaiita sekuti ngirozi ndidzo dzainge dzatitungamirira kuchitoro ichocho. Mukadzi uyu nehanzvadzi yedu vaiva nezita rekupedzisira rakafanana, vaibva kumusha kumwe chete, uye vana vavo vainge vakada kuenzana! Kudai mukadzi uyu aiva nezita rekupedzisira rakasiyana nerehanzvadzi iyi kana kuti vachibva kumusha kwakasiyana, tingadai takaziva kuti haasiriye wataitsvaga.” Vangopfuura chitoro chimwe chete, vakabva vawana hanzvadzi iya yavaitsvaga yakatovamirira.
“Ndakaona kuti Jehovha haana kundikanganwa, kunyange zvazvo ndakanga ndava nemakore ndisingachaiti basa. Izvi zvakaita kuti ndione kuti anondikoshesa.”
Kurasika uku kwakaita kuti mukadzi wavakatanga kuona atange kudzidza Bhabheri uye kupinda misangano. Hanzvadzi iya yakanga isingachaiti basa yakatanga kupinda misangano yose uye kugara ichibuda muushumiri. Yakati, “Ndakaona kuti Jehovha haana kundikanganwa, kunyange zvazvo ndakanga ndava nemakore ndisingachaiti basa. Izvi zvakaita kuti ndione kuti anondikoshesa.”
Kushandisa Mameseji Kana Mamiriro Okunze Asina Kunaka
Philippines: Greg achitumira mameseji
Greg naAlma vakatamira kuchitsuwa cheCatanduanes kuPhilippines kunoshumira kunodiwa vaparidzi voUmambo vakawanda. Kune dzimwe nzvimbo dzine makomo, saka Greg naAlma vanofanira kufamba makiromita 19 kuenda kune dzimwe ndima. Dzimwe nguva vanokwasva chikepe kwemaawa maviri vachienda kunoparidza kune zvimwe zvitsuwa. Munguva yekunaya, zvinenge zvakaoma chaizvo kuti vaendeko. Saka pane kuti vangogara pamba vasiri kuparidza, vakafunga kushandisa chirongwa chekambani yemafoni avo, chekutumira mameseji chero aunoda asi wabvisa mari shoma.
Greg anoti anowanzotanga meseji yacho nekunyora zita rake. Anozowedzera kuti, “Ndinoda kukuudzai mashoko anobva muBhaibheri.” Rumwe rugwaro rwaakaona kuti rwunoshanda ndiJohani 17:3. Anotanga ataura mashoko arimo, obvunza mibvunzo miviri inoti: Mwari wechokwadi ndiani? uye Jesu Kristu ndiani? Adaro, anokumbira munhu wacho kuti apindure. Kana akapindura, Greg anobva amutumira rwumwe rugwaro rwakadai saPisarema 83:18. Kana akaramba achipindura mameseji acho, Greg anokumbira kuti afonere munhu wacho, voenderera mberi. Greg naAlma vanoti vazhinji vanopindura.
Mumwe mukadzi akatumirwa meseji naGreg naAlma aiva nemibvunzo yeBhaibheri yakati kuti, saka vakatumirana mameseji akawanda chaizvo. Izvi zvakazoita kuti mukadzi uyu atange kudzidza Bhaibheri. Mukadzi uyu akaudzawo waaishanda naye uye muzukuru wake zvaaidzidza. Pakupedzisira, vose vari vatatu vakazobhabhatidzwa.